सुरक्षित तरिकाले कम्प्युटर कसरी सफा गर्ने ? - सुरक्षित तरिकाले कम्प्युटर कसरी सफा गर्ने ? -
काठमाडौं । तपाईंहरु धेरैले आजको जमानामा कम्प्युटर तथा ल्यापटप प्रयोग गर्नुहुन्छ । दैनिक प्रयोगमा ल्याउँदा त्यसलाई कसरी सफा गर्ने भन्नेबारे थाहा नहुन सक्छ ।
कम्प्युटर सफा गर्नका लागि एयर कम्प्रेसर तथा विद्ययुतीय क्लिनर बिनै तपाईंले सुरक्षित रुपमा कम्प्युटर तथा ल्यापटप सफा गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पानी र रुबिङ अल्कोहल लिनुहोस् । तपाईंले रुबिङ अल्कोहल बजारमा सजिलै किन्न पाउनुहुनेछ । अब चौडा किसिमको एउटा माइक्रोफाइबर कपडा लिनुहोस् । यसले कुनै स्क्र्याच नगरेरै कम्प्युटर तथा ल्यापटपको सबै किसिमका फोहरमैला तान्न सक्छ ।
हावाको चापबाट सफा गर्ने क्रममा फोहर मैला बाहिर निस्किनुको साटो किबोर्ड भित्र जम्मा भएर बसिरहेको हुन्छ ।